IGastronomy yaseGalician - Izitsha zendabuko kakhulu zakuleli zwe | Ukuhamba kwe-Absolut
La I-gastronomy yaseGalician kuhluka kakhulu. Izitsha ezinezithako eziyisisekelo nezilula, kepha lokho kunikeza inhlanganisela yolwandle nomhlaba. Ngaphezu kokuqoqa imikhiqizo evela endaweni, ukuluma ngakunye kuba yidili langempela, okwenza izindlela zokupheka zihlale zihlala ezizukulwaneni ngezizukulwane.
Kokubili ukudla, kanye nesiphuzo kuyinto ehlala ikhona uma sikhuluma ngayo I-gastronomy yaseGalician. Isiko lesifundazwe ngasinye salo singafingqwa ngezitsha ezilandelayo esizokhuluma ngazo. Yize kukhona abanye ongabanambitha kuphela uma uvakashela leli zwe eligcwele iMeiga.
1 I-octopus, polbo à feira, isidlo sokuqala seGalician gastronomy
2 Umhluzi waseGalician
3 Uphayi waseGalician
4 Lacon nge itheniphu eziqongweni
5 Ikhekhe likaSantiago
6 I-Churrasco, inyama eyisisekelo ngaphakathi kwe-gastronomy yeGalicia
7 Ukudla kwasolwandle
8 Upelepele wePadrón
9 AmaFreixós noma amaFilloas
10 Utshwala bekhofi noma ukhilimu we-pomace?
I-octopus, polbo à feira, isidlo sokuqala seGalician gastronomy
Ingenye yezindlela zokupheka zendabuko, empeleni kunezingxenye eziningi zeGalicia lapho benza khona iphathi yabo yalokhu kudla okumnandi okumnandi. Kuyiqiniso futhi ukuthi i-octopus ingalungiswa ngezindlela ezihlukile, kepha isiko laseGalician likhetha à feira. Leli gama livela kumbukiso wakudala obubanjelwe e-O Carballiño, esifundazweni sase-Ourense. Ukondla labo abeza kuye, kwakukhona lokhu kulungiselelwa kwe-octopus futhi kancane kancane kwasakazeka kuyo yonke insimu.
Okuthile okudonse ukunaka kwabo bonke abanelukuluku, kuze kube namuhla. Isisekelo ukupheka i-octopus, usike ube izingcezu ezincane noma izingcezu, engeza usawoti, i-paprika kanye namafutha amahle. Kwesinye isikhathi kungaphakwa futhi nge-'cachelos ', okungukuthi, ukupheka amazambane emanzini afanayo ne-octopus. Ungazisika zibe yizicucu noma izingcezu ezincanyana bese uziphaka wedwa noma, uhamba ne-octopus ezohlala ihamba ngepuleti lokhuni.
Enye yezitsha eziyinhloko zezinyanga ezibandayo. I- Isobho laseGalician Yenziwe ngesisekelo samafutha noma amafutha, okunezelwa kuwo inyama efana nehlombe noma ubhekeni nobambo. Ngaphandle kokukhohlwa i-chorizo, ubhontshisi omhlophe, amazambane kanye nemifino. Kulokhu, okucelwe kakhulu yimifino yetheniphu ngaso sonke isikhathi, kepha futhi kungaba yitheniphu noma iklabishi. Yize kulokhu kokugcina, umhluzi uzonambitha ubumnandi futhi ukuthinta usawoti kuzofanela kulungiswe. Zonke izithako zifakwa ebhodweni elikhulu kakhulu futhi zigcwaliswa ngamanzi okupheka. Vele, umphumela ungaphezu kokuthokozisa!
Njengesidakamizwa, singesinye sezidume kakhulu. Ingatholakala nasezinhlelweni zezimakethe noma ezimakethe noma ezindaweni zokubhaka nezitolo ezinkulu. IGalician empanada iyavuma izithako eziningiNgakho-ke, yize izinhlanzi ze-tuna zingenye yezisisekelo, kukhona nenyama noma i-cod fish phakathi kwezidume kakhulu. Kepha asikwazi ukukhohlwa ukuthi iyavuma izithako ezifana ne-scallops, i-conger eel, izimbaza, i-octopus nakho konke lokhu kuyingxenye yesosi no-anyanisi ne-paprika okuzoholela ekugcwalisweni kwenhlama ezoholela empanada uqobo.
Lacon nge itheniphu eziqongweni
Futhi, esinye sezitsha ezijwayelekile ze-gastronomy yeGalicia. Njengoba igama layo lisho, ngakolunye uhlangothi kukhona inyama eyi- ihlombe lengulube, etholakala ezingalweni zayo zangaphambili. Inyama enokuthinta okunosawoti okuphekwe nemifino okungeyona enye ngaphandle kwemifino yetheniphu. Kwesinye isikhathi ungangeza namazambane asekhishini. Kodwa-ke noma kungaba kanjani, kungenye yalezo zibiliboco ezihambisana nezinsuku ezibandayo kakhulu zasebusika.
Phakathi kokudla okuyinhloko nokudla okuvuthayo, kuyithuba lokupheka. Ngoba ziningana, kepha enye yezona eziphambili yiTarta de Santiago. Uzoyibona ngoba imbozwe ngoshukela oqandayo bese kudwetshwa iSiphambano SaseSantiago kuso. Inomsuka ongaziwa kepha-ke, siyazi ukuthi sekuyiminyaka eminingi, idluliswa isuka kwesinye isizukulwane iye kwesinye. Phakathi kwezithako zawo sithola ukuthi ama-alimondi ayisisekelo sawo, kanye noshukela, amaqanda kanye abavamile ukuphatha ufulawa.
I-Churrasco, inyama eyisisekelo ngaphakathi kwe-gastronomy yeGalicia
Emikhosini eminingi, kuyinsumansumane ukuthi kuqala kube ne-empanada bese kuba… I-churrasco! Ngoba kuvame ukwenziwa lapho kufika isimo sezulu esihle, ezindaweni zokosa inyama nasemihlanganweni yabangane. Kepha kuyiqiniso ukuthi i-steak enhle ingatholakala noma nini ezindaweni zokudlela. Ingabe i- ubambo lwengulube noma lwenkomo inyama ekhethiwe, kanye namasoseji esiCreole. Inyama kufanele ihlanjululwe bese yenziwe kwi-grill. Njengoba amalahle azonikeza lokho kuthinta kokugcina. Kuyiqiniso ukuthi zingaphinde zihambisane nososo obenzelwe izoso ezinezinongo. Amafriji nesaladi laseFrance yizitsha eziseceleni kwetafula.
Noma ngabe uyinyama eningi ne-churrasco, akufanele uthi cha okuhle Isitsha sokudla kwasolwandle eGalicia. Ngoba kumayelana nemikhiqizo yasendaweni, okusha futhi nakho konke ukunambitheka. Uzokwazi ukunambitha isitsha esihle sokudla kwasolwandle futhi kuso, izinhlobo ezahlukahlukene zokudla kwasolwandle okuzonambitheka njengoGloria. Ukudla okuvame kakhulu esizokuthola kuwo ngama-crayfish nama-prawn, ngaphandle kokugeja ama-barnacle amnandi kanye nezinkalankala noma izinkalankala zesicabucabu, phakathi kokunye. I- i-scallops albariño noma i-compostelana kuyaphawuleka.
Uma nge-churrasco ufuna ezinye Upelepele, ukuthi bavela ePadrón. Kungani? 'Ngoba uns bite e outros, non'. Ngakho-ke kukhona i-adventure uma uhlafuna upelepele omnandi noma obabayo. Lokhu kudla okumnandi kudinga nje ukuthosiwe emafutheni amaningi bese uthela isamba sikasawoti omningi phezu kwabo.
AmaFreixós noma amaFilloas
Kuyiqiniso ukuthi kukhona umehluko phakathi kwalokhu okubili futhi kuya ngendawo. Ngalesi sizathu, ezinye zilungiswa ngegazi lengulube, kanti ezinye zinikezwa ukuthintwa okumnandi ngisho nangokwengeziwe nge-anise nangesisekelo sobisi. Yiba ngangokunokwenzeka, kungenye yama-dessert amnandi kakhulu, okuthi Imvamisa zithathwa ezindaweni zokudla. Yize kulo nyaka uphela bazoqhubeka nokuba mnandi ngendlela efanayo.
Utshwala bekhofi noma ukhilimu we-pomace?
Ngemuva kwakho konke lokhu kudla nophudingi, okuholela ekutheni sikhulume ngedili elikhulu, akukho okufana nesibhamu sepomace 'ukwehlisa ukudla'. Okuthile okuyisisekelo ukwenza ukugaya. Ungathola i-herb pomace noma ukhilimu we-pomace, uthambe kancane. Kepha kuyiqiniso ukuthi i- utshwala bekhofi Kungokunye kokudla okuyisisekelo ngaphakathi kwe-gastronomy yeGalicia, ngoba ihlala ingumngane omuhle kuyo. Noma ungaba nesibindi nge kushile nesipelingi sayo ngaphakathi kwe-gastronomy yeGalicia?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » I-gastronomy yaseGalician